Ithi Makungene Amasosha Ebuholini Be ANC I SACP – eHowzit
Ithi Makungene Amasosha Ebuholini Be ANC I SACP
Uphiko lwe South African Communist Party (SACP) Kwi Lower South Coast selunxenxe ukuba uma sekuyiwa kwingqungquthela ezoba ngasekupheleni konyaka kukhethwe Abaholi abazokwazi ukulekelela bazokwazi nokukhulisa iqembu ngokuvakashela amaziko kanye nokugqugquzela ubumbano eqenjini.
Usihlalo we SACP kwisifunda soGu uMnu Tom Madlala uthe kuzomele lowo ongusihlalo we African National Congress uMnu Tolomane Myayiza abenethimba lakhe elizokwazi ukubuyisa ubumbano eqenjini, elibonakala lithanda ukuba nezinkinga njengalokhu kuhlelwa ingqungquthela.
“Kuzomele U Comrade Tolomane Myayiza ohole abazimisele ngokulungisa izinkinga ezibhekene neqembu, futhi kube khona namasosha oMkhonto Wesizwe Military Veteran Association (MKMVA) njengalokhu kuyiwona awazi kahle kakhulu umzabalazo wakuleli” Kusho uSozabe.
Lokhu ukusho ngesikhathi kuqhubeka inonzo yesikhumbuzo salowo obengusihlalo we MKMVA kwi Lower South Coast uMnu Cyrill Shezi nodlule emhlabeni Ngesonto emuva kokugula Isikhathi eside.
UKUNganakwa kwalamasosha sekususe omkhulu umsindo njengalokhu kuthiwa sekugcin ngokuthi kubizwe zonke izimeya zatshelwa ukuba ziwaqashe, njengalokhu ubuholi busolwa ngokungawanakekeli, ebe kuyiwona ayesebenza ukuvikela iqembu elibusayo.
“Abasebenzi bakomasipala uma sifika kubona bafike basibuze ukuthi singobani, basivimbele ngisho nokuthi sixhumane nalabo esibathumile ukuba bahole iqembu komasipala. Amasosha adla emgqonyeni awanakiwe uma ubheka nje kuthathwa abantu thizeni banikezwe amathenda 14 Million, kube kuleyomale bengaqasha amasosha angama-60 bawaholele unyaka wonke” kuphetha uMadlala.